Ungakukhansela kanjani okubhalisile ku-iPhone yakho, i-iPad noma i-iTunes | Izindaba ze-IPhone
Kuvamile kakhulu namuhla ukuthi ngamunye wethu okungenani oyedwa uyasebenza ukubhalisa kwisicelo noma kumagazini wedijithali. Izinhlelo eziningi ziya zikhetha i Insiza ye-Freemium yabo, ukuze bathole inzuzo emisebenzini yabo. Kungenzeka ukuthi awusasebenzisi leso sicelo osikhokhela njalo ngenyanga futhi udinga ukusikhansela, ngezansi sizokukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani ngezindlela ezimbili ezahlukene.
Uma sikhuluma ngakho izinhlelo zokusebenza noma imidlalo Freemium, kanjani Nintendo, Sibhekisa kulabo esingabalanda ngokuphelele mahhala kusuka ku-App Store futhi usebenzise ngokujwayelekile kepha futhi unikele ngochungechunge lwemisebenzi noma ukuthuthuka okudinga i- inkokhelo yanyanga zonke noma yaminyaka yonke.
Uma sikhuluma ngokubhaliselwa kwanyanga zonke kungenzeka, futhi empeleni iningi lalo linjalo, ukuthi unezindleko eziphansi kakhulu futhi asiqapheli ukuthi bayasikhokhisa. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthi ngezikhathi ezithile sibuyekeze konke okubhaliselwe esikusebenzayo ukuze sigweme ukukhokhiselwa okuthile esingasakusebenzisi noma esingasakufuni.
Sinezinketho eziningana zokubuka nokukhansela ukubhaliswa kwethu, eyodwa ivela kudivayisi yethu ye-iOS, i-iPhone noma i-iPad, noma inketho yesibili ukukwenza kusuka ku-iTunes.
1 Khansela okubhaliselwe kusuka ku-iPhone noma i-iPad
2 Khansela okubhaliselwe kusuka ku-iTunes
Khansela okubhaliselwe kusuka ku-iPhone noma i-iPad
Ngokusobala, into yokuqala okufanele uyenze ukubhekana ne- «Izilungiselelo»Kusuka kudivayisi yethu.
Okulandelayo, kufanele singene esigabeni «Isitolo se-iTunes ne-App»Futhi lapho, sangena kweyethu I-Apple ID. Sizosibuza ukungena ukuqinisekisa ukufinyelela.
Uma sesingaphakathi, sibheka inketho «Okubhaliselwe»Futhi sayifaka. Uhlu kufanele luvele ngalunye kokubhaliselwe okusebenzayo esinakho.
Ithuba lika khansela lena esingayifuni. Chofoza kuso bese sizongena ukubona ifayela le- imininingwane yokubhalisa, uhlobo lokubhaliselwe, intengo kanye nenketho ye- Zikhiphe ohlwini.
Uma sichofoza kule nkinobho, kuzovela umlayezo wokuxwayisa ukuqinisekisa ukuthi siyafuna khansela okubhaliselwe okushiwo. Ukukuqinisekisa nje, sizobe sesiqedile inqubo. Iso, i okubhaliselwe akupheli lapho sikukhanselaOkusho ukuthi, uma kuhlelwe ukuthi ivuselelwe ngomhla ka-30 kanti namuhla kungumhla ka-15, sizozijabulela izinsizakalo zayo kuze kube usuku okufanele luvuselelwe ngalo.
Khansela okubhaliselwe kusuka ku-iTunes
Uma usungaphakathi kohlelo lokusebenza iTunes, kusuka ku-PC noma ku-Mac, kufanele siye, kumenyu, kukhetho «I-akhawunti -> Buka i-akhawunti yami".
Izosicela ukuthi sibhale ifayili le- iphasiwedi bakithi I-Apple ID bese sizobona yonke imininingwane yalokhu.
Phakathi kwezigaba ezahlukahlukene ezivela, cishe ekugcineni, esigabeni esithi Izilungiselelo, inketho «Okubhaliselwe»Futhi eceleni kwaso inkinobho ye-«Phatha".
Uma sesingaphakathi, sizobona lonke uhlu lwefayela le- okubhaliselwe okusebenzayo nokuphelelwe yisikhathi ukuthi sihlotshaniswe ne-ID yethu ye-Apple. Uma sichofoza ku- «Hlela»Singabona imininingwane yayo bese sikhansela leyo esiyifunayo.
Sincoma ukuthi ngezikhathi ezithile wenza i- ukubuyekezwa kokubhaliselwe kwakho, njengoba njengoba ngishilo ngaphambili, bajwayele Amanani aphansi kakhulu lokho asiqapheli kepha basikhokhisa njalo ngenyanga noma unyaka odlulayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungakhansela kanjani okubhaliselwe kwakho kusuka ku-iPhone yakho, i-iPad noma i-iTunes
UMara Garcia kusho
Ngifuna ukukhansela ukubhaliswa kwami ​​ku-iTunes, engingakwenzanga, bathathe ifoni yami, ngithanda ukukwazi ukuyikhansela, angiyisebenzisi
Phendula uMara Garcia
UBenigno Marín Calvo kusho
Ungichazele kahle, ngenxa yaleli khasi ngikwazile ukuzikhipha ohlwini lwababhalisile. Ngiyabonga.
Phendula uBenigno Marín Calvo
Ngalolu hlelo lokusebenza ungasebenzisa Umsizi weGoogle nge-smartphone yakho ye-Android nama-AirPods
Umshini wokukhangisa wakwa-Apple ungena, i-iPhone X kumabhodi amakhulu